Ambohitrimanjaka ny fandresena azo tamin’ilay fampiaton’ny fanjakana ilay tetikasa tanamasoandro nokasaina hanotofana tanimbary mamelona fianakaviana 9.000 eny amin’iny faritra iny. Rehefa vakoka mantsy dia vakoka hoy izy ary an’ny Malagasy rehetra fa tsy an’olon-tokana izay mamaritra ny maha-izy azy ny hasin’ny tanana iray. Manana ny maha-izy azy sy ny tantarany Ambohitrimanjaka raha ny nambarany ary tsy navelan’Andriamanitra ho irery izy ireo tamin’ny ady natrehiny. Nisaotra an’Andriamanitra manokana Randrianaivo Erci noho izany. Nisaotra ny mponin’Ambohitrimanjaka sy ireo mpiara-nitolona rehetra ihany koa izy, indrindra fa ireo mpanao gazety nanao ny ainy tsy ho zavatra namoaka sy nivoy ity vaovao momba an’Ambohitrimanjaka ity.